Ndezvipi zviridzwa zvemamiriro ekunze? Ndezvipi izvi? | Network Meteorology
Meteorological zviridzwa uye nebasa razvo
Monica sanchez | | Meteorological Zviridzwa
Kana iwe uchishuva nezve meteorology, iwe uri chokwadi kufunga kwekuwana imwe yeakawanda emamiriro ekunze zviridzwa zviripo Mamiriro ekunze, chokwadi? Kune akawanda mamodheru, asi kune mamwe akazara kupfuura mamwe, zvinoenderana pamusoro pezvose pamutengo wavo. Muchokwadi, dzinodhura zvakanyanya ndidzo dzinogona kuyera misiyano yakawanda yemamiriro ekunze uye, nekudaro, inonyanya kukodzera kune avo vanoda kuziva zvakadzama mamiriro ekunze munharaunda mavo, nepo zvakachipa zvakanyanya zviri kune avo vanoenderana. nekuziva tembiricha iyo yakanyorwa mukati mezuva uye pamwe nekuziva iyo ambient mwando.
Zvichienderana nezvamuchazoshandisa, zvichave zvinonakidza kuziva ndeapi marudzi emamiriro ekunze emamiriro ekunze aripo uye nderipi basa rine rimwe nerimwe rawo. Nekudaro, zvichave zviri nyore kwazvo kwauri kuti usarudze yakanyanya kukodzera modhi iwe.
1 Thermometer, chimwe chezvinhu zvemeteorological izvo isu tese tine
1.1 Mercury thermometer
2 Meteorological mvura inonaya
2.1 Mhando dzemamiriro ekunze emvura
3.1 Mhando dzema hygrometer
Thermometer, chimwe chezvinhu zvemeteorological izvo isu tese tine
Kana isu tichifanira kusarudza imwe yemeteorological zviridzwa par kugona, isu tese tinotora iyo thermometer. Ndicho chiridzwa chinonyanya kushandiswa nekuti nekuda kwayo tinogona kuziva iko tembiricha yakanyorwa patinoitarisa. Kunyangwe zvakadaro, zvinokwanisika kuti iwe uchawana mamwe anoyera chete kudziya kwakanyanya (pakati -31'5ºC uye 51'5ºC) uye nevamwe vanoyera hushoma (pakati -44'5ºC uye 40'5ºC), kunyange chakanyanya kuzivikanwa ndechekuti ese ari maviri anoonekwa pane imwecheteyo chiteshi skrini.
Kune akawanda marudzi ema thermometers: gasi, kuramba, kiriniki… asi mercury nedhijitari ndiwo anoshandiswa mumamiriro ekunze.
Iyo yakavharidzirwa girazi chubhu ine mercury mukati. Vhoriyamu yayo inochinja sezvo tembiricha ichichinjawo. Ichi chimbo chakagadzirwa naGabriel Fahrenheit muna 1714.
Chazvino uno. Ivo vanoshandisa transducer zvishandiso (senge mercury) izvo zvinobva zvashandiswa nemagetsi masekete kushandura iwo madiki emagetsi misiyano akawanikwa kuita manhamba. Nenzira iyi, tembiricha yakanyorwa ichaonekwa pachiratidziro.
Meteorological mvura inonaya
Izvi zviridzwa zvemamiriro ekunze inoyera huwandu hwemvura yadonhera munzvimbo iyo yaiswa. Mamilimita imwe inomiririra litre imwe chete, uye pamazuva apo mvura isingamiri kunaya, zvinokurudzirwa kuti uiongorore nguva dzese dze4-6 (zvinoenderana nesimba rayo uye nekukwanisa kwero redu remvura) kuitira kuti rekodhi yacho ive yechokwadi. zvinogoneka.
Mhando dzemamiriro ekunze emvura
Kune maviri mamodheru emamiriro ekunze emvura gauges: emanyorerwo nematanho.
manyuwari: ndiwo akachipa zvikuru. Ivo vanongova mudziyo wechi cylindrical wakagadzirwa wepurasitiki kazhinji girini muvara nechiyero chakapedza kudzidza chinoyerwa mumamilimita.
Total: kuenzanisa mamiriro ekunze emvura nemamiriro ekunze anonatsiridza kunyatso, sezvo achiumbwa nefanera uye Anoshanda anorekodha mvura inodonha maawa gumi nemaviri.
Iyo hygrometer ichabatsira kwazvo kuziva iyo huwandu hwehukama hunyoro mumhepo zviri munzvimbo medu. Mhedzisiro yacho inoratidzwa pakati pe0 ne100%. Huwandu uhwu hunomiririra chikamu cheuwandu hwemhute yemvura irimo mumhepo.
Mhando dzema hygrometer
Izvi zviridzwa zvemamiriro ekunze zvakarongedzwa zvichienderana nekuti zviri analogu kana dijitari.
Analog: vanomira pakuve vakanyatso nyatso, nekuti ivo vanoona shanduko muhunyoro mumhoteredzo nekukasira. Asi dzimwe nguva iwe unofanirwa kudzikamisa, saka havawanzo tengesa zvakawanda.
digitaalinen: manhamba ari zvakare akarurama, kunyangwe zvishoma zvishoma. Ivo havadi chero mhando yekuchengetedza, uye zvakare vakagadzirira kushandisa kana vangotenga.
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve hygrometer
Iyo barometer ndeye iyo anoyera huremu hwemhepo pamusoro peguruva repasi, iyo inozivikanwa nezita remhepo yekumanikidza. Yekutanga yakagadzirwa nefizikisi Torricelli muna 1643 mushure mekuita yakapusa kuyedza:
Chinhu chekutanga chaakaita kwaive kuzadza girazi chubhu nemekiyuri iyo yakavharwa kune rumwe rutivi, ndokuichinjisa pamusoro pebhakiti iro rakanga rakazadzwawo nemekiyuri. Sezvineiwo, chikamu che mercury chakadonhedza masentimita mashoma, yakamira yakamira ingangoita 76cm (760mm) kureba. Saka pakamuka millimeter yemekiyuri kana mmHg.
Asi pachine chimwe chinhuzve: zvakajairika mhepo kumanikidza pagungwa chikamu 760mmHg, saka iwe unogona kuve neiyi data data kuti uzive kana mamiriro ekunze achange akanaka kana kwete. Akazviita sei? Zviri nyore kwazvo. Kana ikadonha zvine mutsindo unozoziva kuti dutu rave kusvika; Pane kupokana, kana ikakwira zvishoma, iwe unogona kuchengeta amburera mukuchengetedza kwemazuva mashoma.
Kutenda kune izvi zvirimo zvemamiriro ekunze isu tinogona kuziva iyo kumhanya kwemhepo. Inonyanya kushandiswa ndiyo inonzi windlass. Ivo vanoyera kumhanya mu km / h.
Kana mhepo 'ikarova' hwindo, inotenderera. Iwo madzokero aanopa anoverengwa nekambani kana kurekodwa pabepa repepa kana iri anemograph.
Iyo heliograph imwe yemidziyo yemamiriro ekunze iyo inotibvumidza kuyera nguva yekunyorwa. Inofanirwa kugadziriswa zvinoenderana nenzvimbo yenharaunda uye zvinoenderana nemwaka wegore rauri, nekuti zuva rinosiyana pakukwirira sekufamba kwegore.
Inonyanya kuzivikanwa ndeye Campbell-Stokes heliograph, iyo ine girazi bhora rinoita kunge lens inoshanduka. Kana mwaranzi yezuva ichipfuura, kadhi rekurekodha 'rakatsva' uye tinogona kuziva maawa ekupenya kwezuva anga ari iwo zuva irori.
Iyo nivometer inoshandiswa kuyera huwandu hwechando chadonha panguva yakapihwa. Kune mhando mbiri: laser, iyo inofanirwa kuendeswa muvhu kuitira kuti inyore, uye acoustic iyo, nekuda kweiyo ultrasonic wave transmitter-inogamuchira, haidi kuve inosangana nechando.
Pakati pese, iyo inodhura chiteshi chezvemamiriro ekunze iri, inonyanya kuve yakajeka. Zvichienderana nekushandisa kwaunoda kuipa, zvinogona kunge zvisina basa kushandisa mari yakawanda nekuti pamwe neimwe inodhura unozogadzirisa. Uye, pane kudaro, kana iwe uchiziva kuti iwe uchazoda kuziva zvimwe, usazeze kuenda kunotenga imwe, iyo inogona kuve nemutengo wepamusoro, asi zvirokwazvo unogona kunakidzwa nazvo zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Meteorology » Meteorological Zviridzwa » Meteorological zviridzwa uye nebasa razvo
sofia yakajeka gonzales akadaro
Izvi zviri kundifambira chaizvo nekuti kuchikoro tiri kuzvipa.Ndatenda
Pindura kuna sofia claro gonzales
Ndiri kuita zvakanaka chose futi. ndatenda
Pindura kuna mariangel
Ndiri kufara kuti zvinobatsirawo iwe, mariangel 🙂.
Ndinoda mamiriro ekunze.
UNOZIVA HERE KUSIMBISA KUNYANYA KUSHANDISWA KUYEDZA MUDZIMAIRO WEMWEYA
Chishandiso chinoshandiswa kuyera mafambiro emhepo ndiyo vane vane mamiriro ekunze
chinja ini kana kuti raive mwenje wemotokari akadaro
tsananguro yakanakisa yakandishandira zvakanyanya
Pindura uchindichinja kana kuti raive mwenje wemugwagwa
Ndiri kufara kuti zvaibatsira kwauri. Kwaziso 🙂
fenzi iro ruzivo rwakanaka rwandinoda 😀
Pindura kuna hector_duran
nenzira iyo ndiyo endometer ndiyo iyo HELP ME !!!
Ndiri kufara kuti yanga iri yekufarira iwe.
Iyo endometer handizive kuti chii, ndine hurombo. Ndanga ndichitsvaga internet kuti ndione kana ndawana chinhu uye hapana chinoratidza; izwi rekuti endometrium chete, iro risinginei nemamiriro ekunze (iri mucosa inovhara nzvimbo ine chibereko).
ok ndatenda monica sanchez ndakawanawo endrometrium kana kuti zvinofanirwa kunge zvichiruma zvakaipa asi zvakanaka ndatenda nekwaziso futi
Isa Burgos akadaro
Mhoroi, ndiregererei, ini ndoda kuziva nezve anemocinemographer ????
Pindura kune isai burgos
Icho chinhu chinobatanidza mamiriro ekunze (kuyera mafambiro emhepo), anemometer (kuyera kumhanya kwemhepo), ine chinhu chepakati chinogadzirisa uye chinonyora data.
mhoro wakadii Ndine mubvunzo wekubvunza. Ichokwadi here kuti mahedhijitari edhijitari akaenzanisirwa nzvimbo dzakakwirira pagungwa? Semuenzaniso, kana ndiri pamamita mazana mashanu pamusoro pegungwa, iko kuverenga uko iyo hygrometer inogona kundipa iko chaiko?
Ndatenda zvikuru pamberi!
Mhoro Juan Manuel.
Hongu, zvirokwazvo: dijitometri yedhijitari anoyera kumanikidza kwemhepo.
Jose Manuel Carrasco Nalvarte akadaro
hello monica aida kuziva mamiriro ekunze akakosha nei ??
Pindura José Manuel Carrasco Nalvarte
Mhoro José Manuel.
Meteorology yakakosha sezvo ichitibvumidza kuziva misiyano yetembiricha, mafambiro uye kumhanya kwemhepo, akasiyana mamiriro ezvemamiriro ekunze, nezvimwewo, uye kuti izvi zvese zvinokanganisa sei zvakasikwa zvakasiyana siyana.
Mhoroi, chii icho chigadzirwa chemamiriro ekunze chiri pamusoro penzvimbo dzebhero
Pindura kuna hhjhjhjh
ruzivo rwakanyanya, rwevakomana, ko mamwe mavhidhiyo, zvingave zvinonakidza
camilla damian akadaro
Ndakaida, maita basa kwazvo, zvakanaka kwazvo zvinhu zvakandibatsira zvakanyanya
Pindura kuna Camila damian
Mhoro Zita RANGU NDINONZI CARLOS NDINOBVA KUPERU NDINODA KUZIVA KANA UNOGONA KundIBATSIRA PAKUVAKA METEOROLOGY INSTRUMENT YENZVIMBO YANDINOGARA, NDINODA ZVAKAWANDA KUZIVA NEZVENYAYA.
pus ini ndinobva kuPeru zvakare, kwaziso kana ndichigona kukubatsira
Victor M Lopez B akadaro
Iwe unofanirwa kudoma kuti 1 (one) mm yemvura inodonha inomiririra huwandu hwe1 (one) litre yemvura munzvimbo yeimwe mita mita (m2)
Pindura kuna Victor M Lopez B
francis alejandra lameda molleda akadaro
Mhoro nhasi ndadzidza nevana vangu zvese zvine chekuita nemeteorology vazhinji
Ndinokutendai, isu tatova nezvatinoshandiswa tembiricha yega yega
Pindura francis alejandra lameda molleda
Carlos Daniel akadaro
Ndatenda kwazvo zvakandishandira zvakanyanya uye zvakanyanya nekuti tiri kuzviona muchikoro changu
Pindura kuna carlos daniel
Zviri kundifambira chaizvo nekuti tiri kuzvipa kuchikoro chesekondari uye handitakure kadhi redigital pane IPad yasekuru (iyi) uye makadhi anopiwa mangwana saka handikwanise kuzvitarisa nhasi.
Ndatenda kwazvo uye nekwaziso kune chero akaisa.
ruzivo urwu runondibatsira zvakanyanya nekuti ndakaita chiratidziro ndinokutendai ❤❤❤❤❤❤❤❤ ????❣
Pindura kuna Kubvumbi
Rwizi rweNile runoita zvishoma nezvishoma kufungidzira
Kupisa kwepasirese kunotungamira vekuAmerica kuti vashandise zvakanyanya